အီလူမီနာထီ (ခေါ်) အလင်းတော်ဂိုဏ်းအကြောင်း - Thutazone
အီလူမီနာထီ (ခေါ်) အလင်းတော်ဂိုဏ်းအကြောင်း
ဘာသာပြန် ရေးသားသူ – Dr.Aung
လူအများစုကတော့ ထိုလျို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်း ရဲ့ တြိဂံချွန်ပုံ ပိရစ်မစ်ထိပ်ဖျားရှိ မျက်လုံးပုံနှင့် အမှတ်တံဆိပ်ကို တွေ့ဖူးကြဖူးပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာ အရာအားလုံးကို မြင်နိူင်တယ်, အရာအားလုံးကို သိနိူင်တယ်, အရာအားလုံးထက် စွမ်းအားရှိပြီး အရာအားလုံးကို လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲနိူင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြသူတွေပါ။ ထို ‘All-Seeing Eye’ အမှတ်တံဆိပ်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် အဖွဲ့အစည်းကတော့ Illuminati ခေါ် လျို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းကြီးပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။ လူအများစုသည် ထိုအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကို သို့လောသို့လော ကြားဖူးနားဝရှိသည်မှာ မှန်သော်လည်း ယနေ့ထက်တိုင်အောင် ထိုလျို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းကြီးမှာ ယုံတမ်းလော? ဒဏ္ဍာရီလော? ဒါမဟုတ် အယူသီးမှု သက်သက်လော? ဟုဆိုကာ ဝိဝါဒများ ကွဲပြားလျက်ရှိနေခဲ့တာပါ။
လေ့လာသူများကမူ ထိုလျို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းကြီးသည် တစ်ချို့သော ကမ္ဘာ့ နိူင်ငံရေး, စီးပွားရေး, လူမှုရေး နှင့် သံတမန်ရေးရာ ကိစ္စရပ်များတွင် နောက်ကွယ်မှ ပူးပေါင်းကြံစည်လျက်ရှိနေသည်ဟု တစ်ထစ်ချယုံကြည် နေကြပါသည်။ အကယ်၍ ထိုလျို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းကြီးသည် လူအများယုံကြည်နေသကဲ့သို့ အင်အားကြီးမား နေသည်ဆိုလျင်
– ဘယ်လိုကြောင့် ထိုမျတောင့်တင်းပြီး အရေးရာအရာရောက် နေခဲ့တာလဲ?
– Illuminati လျို့ဝှက်အသင်းကြီးဟာ မည်သည့်နေရာက စတင်မြစ်ဖျားခံခဲ့ တာလဲ?
– လျို့ဝှက်အသင်းဖြစ်လင့်ကစား အဘယ်ကြောင့် လူတွေက ထိုအသင်းအကြောင်း သိနေခဲ့ကြတာလဲ?
– ‘All-Seeing Eye’ အမှတ်တံဆိပ်အပြင် မည်သည့်အမှတ်အသားတွေကကော ဒီလျို့ဝှက်အသင်းကြီးနဲ့ ဆက်စပ်နေသေးတာလဲ?
ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေက စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။
ဒီတော့ အသေးစိတ် မလေ့လာခင် Illuminati လျို့ဝှက်အသင်းကြီးကို ကျနော်တို့အရင်က ဘယ်လိုသိထားခဲ့ လဲဆိုတာအရင်ပြန်နွေးကြည့်ရအောင်ဗျာ။ ရှေးယခင်ကတည်းက ဗာတီကန်ဘာသာရေးအယူအဆနဲ့ သိပ္ပံပညာဟာ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီး တစ်ချို့က သိပ္ပံပညာကိုယုံကြည်ကြတယ်။ သိပ္ပံပညာသာလျှင် ဖန်ဆင်းရှင်(God)အသစ်ဖြစ်တယ်လို့ ကြွေးကြော်လာခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီလိုကြွေးကြော်လာကြတဲ့လူတွေဟာ လျှို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြတယ်။
“ပါရမီဉာဏ်အလင်းတော်ဂိုဏ်း(Illuminiti)´´လို့ခေါ်တဲ့လျှို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထောင် ခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ဟာ ရောမနဲ့ဗာတီကန် RC ဝတ်ဘုရားကျောင်းတော်တွေကို စိန်ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့လျှို့ဝှက် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။ အဲဒီနောက်“ပါရမီ ဉာဏ်အလင်းတော်ဂိုဏ်း´´ရဲ့မျိုးဆက်ဟုဆိုသော “ဖရီးမေဆင်ဂိုဏ်း´´လို့ခေါ်တဲ့ ဂိုဏ်းလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ “ဖရီးမေဆင်´´ဂိုဏ်းမှာလည်း “ပါရမီဉာဏ်အလင်းတော်´´ဂိုဏ်းကဲ့သို့ပင် ကမ္ဘ္ဘာ့ထိပ်သီးသိပ္ပံပညာရှင်များ နှင့်ဖွဲ့စည်းထားသော ဂိုဏ်းဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာ၌ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သော သိပ္ပံပညာရှင်များသာမက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ အကြီးအကဲများပါ ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမေရိကန်ဒေါ်လာရဲ့ နောက်ကျောဘက်တွင်ပါရှိသော မျက်လုံးနှင့်ပိရမစ်ပုံတံဆိပ်သည် ဉာဏ်အလင်းတော်ဂိုဏ်း၏ သင်္ကေတဖြစ်တယ်လို့ သိရှိခဲ့ရပါတယ်။
“မျက်လုံး´´က“သိမြင်ခြင်း´´ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာ အလင်းကို ကိုယ်စားပြုပြီး မျက်လုံးနှင့် ပိရမစ်တံဆိပ်ကို(Trinacria)လို့ခေါ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ စက္ကူဒီဇိုင်းရေးဆွဲစဉ်က အဲဒီတံဆိပ်ကိုထည့်ဖို့ ဒုတိယသမ္မတ ဟင်နရီဝေါလေ့(စ်)က အမေရိကန်သမ္မတကြီး ရုစဗဲ့ကို တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးလုံးမှာ လည်း အလင်းတော်ဂိုဏ်းမှအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြတယ်လို့ လူအချို့က ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါတွေက ကျနော်တို့အနေနဲ့ Illuminati နဲ့ပက်သက်ပြီး တစ်စွန်းတစ်စ သိမြင်ကြားသိခဲ့ရတာတွေပါ။ ဒီတော့ Illuminati အသင်းအကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိဖို့အတွက် ဒီလျို့ဝှက်အသင်းကြီးရဲ့ မြစ်ဖျားခံရာ မူလဇစ်မြစ်ကို လေ့လာကြည့်ရအောင်လားဗျာ။
Illuminati သည် လက်တင်စကားလုံးဖြစ်ပြီး အလင်းရောင်ပြပေးသည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။ ‘Order of the Illuminati’ ကို ဂျာမနီနိူင်ငံ အင်ဂိုစတက်မြို့တွင် မေလ ၁ ရက် ၁၇၇၆ ခုနှစ်တွင် ပရော်ဖက်ဆာ Adam Weishaupt မှ တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အသင်း၏ ရည်ရွှယ်ချက်မှာ ပြည်သူလူထု တော်လှန်ပုန်ကန်ခြင်းကို အားပေးအားမြောက်ပြုရန်နှင့် သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်ကို အဆုံးသတ်စေရန် ရည်ရွှယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အသင်းဝင် ၅ ယောက်ဖြင့်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော လျို့ဝှက်အသင်းသည် ၁၇၈၀ ခုနှစ်အရောက်တွင် အသင်းသား ၆၀ ခန့်ရှိသည်အထိ တစ်ဖြေးဖြေးအင်အားကြီးမား လာခဲ့ပါသည်။ ပရော်ဖက်ဆာသည် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့် လုပ်ရှားမှုများတွင် ရာထူးအဆင့်ဆင့် ခွဲထားခြင်း,အထူးလျို့ဝှက်စေခြင်း တို့ဖြင့် အသင်းဝင်များ၏ စိတ်ပါဝင်စားမှုကို အရယူနိူင်ခဲ့ပါသည်။
၁၇၈၀ နှောင်းပိုင်းတွင် Adolph Freiherr Knigge ပူးပေါင်းပါဝင်လာပြီးနောက်ပိုင်းတွင်မူ အသင်းဝင်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်အထိ ကြီးမားခဲ့ပါသည်။ ပရော်ဖက်ဆာ Weishaupt နှင့် Knigge တို့ပူးပေါင်းပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အသင်းကြီးသည် ပိုမိုပဟေဌိဆန်လာကာ အဆမတန်ကြီးမားလာခဲ့ပါသည်။ အသင်းကြီး လျို့ဝှက်ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးများတွင်လည်း ပရော်ဖက်ဆာအပါအဝင် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းလူနည်းစုသာ တက်ရောက်ခွင့်ရကာ ဝတ်ရုံရှည်ကြီးများခြုံလျက် အရေးကြီးဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်လုပ်ဆောင်လေ့ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ အသင်းတွင် လူကုံထံများ၊ အာဏာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းများ လျို့ဝှက် ပူးပေါင်းပါဝင်လာသည်အထိ ခရီးတွင်ကျယ်ခဲ့ပါသည်။
ပရော်ဖက်ဆာ Adam Weishaupt
တစ်ဖြေးဖြေးတန်ခိုးအာဏာ ကြီးမားလာပြီး အရေးကြီးလျို့ဝှက်ကိစ္စရပ်များကို ကြိုးကိုင်ဆောင်ရွက်လာနိူင်သော Illuminati အဖွဲ့ကြီးသည် ၁၇၈၄ အရောက်တွင် လျို့ဝှက်အဖွဲ့ဝင် ၃၀၀၀ ကျော်သည်အထိ အောင်မြင်လာခဲ့ပါသည်။ ၁၇၈၄ ဧပြီတွင်မူ လျို့ဝှက်ကြံစည်မှုတစ်ခုအကြား ပရော်ဖက်ဆာ Weishaupt နှင့် Knigge တို့ အငြင်းပွားရာမှ Knigge သည် Illuminati မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့လေသည်။ ၁၇၈၅ ခုနှစ်၌ မြို့စားကြီး Karl Theodor မှလည်း အင်အားကြီးမားလာပြီး ၎င်းတို့၏ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို ခြိမ်းခြောက်လာသော Illuminati အဖွဲ့ကြီးကို တရားဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သော အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ကြေငြာကာ တားမြစ်သုတ်သင်မှုများ ပြုလုပ်လာတော့သည်။
ယင်းနောက်ပိုင်းမှစ၍ အသင်းဝင်များအကြား ကတောက်ကဆဖြစ်မှုများ, အာဏာပိုင်များ၏ လျို့ဝှက်အသင်းအပေါ် သတိပြုမိလာမှုတို့ကြောင့် Illuminati အသင်းကြီးတည်ထောင်ပြီး ၁၃ နှစ်ခန့်အကြာတွင် ၁၇၈၉ ခုနှစ်တွင် အသင်းကြီးမှာ ပျက်သုန်းခဲ့ရလေသည်။ သို့သော် ထိုသို့ပျက်သုန်းခြင်းသည် အမှန်တကယ်မဟုတ်ပဲ ခေတ္တခဏမျ ခြေရာဖျောက်သွားခြင်းသာဖြစ်ပြီး ယနေ့အချိန်အထိတိုင် လျို့ဝှက်လှုပ်ရှားလျက် ရှိနေကြောင်း လေ့လာသူများက ယုံကြည်နေကြပါသည်။ ၁၇၈၉ နောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဖြေမပေါ်သော နိူင်ငံရေးလုပ်ရှားမှု အချို့သည်လည်း ထိုအသင်းကြီး၏ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြစ်သည်ဟု ယူဆလျက်ရှိကြပါသည်။
ထိုမျ လျို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော Illuminati အသင်းကြီးသည်
– Illuminati သည် “The Enlightened Ones” ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည့်အတိုင်း ထိုအဖွဲ့အစည်းကြီးသည် အခြားသူများထက်ပိုမို၍ သတင်းအရင်းအမြစ်ပြည့်စုံသည်ဟု ခံယူထားကြခြင်း။
– လူအများယုံကြည်ထားသကဲ့သို့ ဘာသာရေးအစွန်းရောက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမဟုတ်ပဲ စတင်တည်ထောင်စဉ်ကတည်းက နိူင်ငံရေး စီးပွားရေးအပေါ်တွင် ဘာသာရေးလွှမ်းမိုးမှု မရှိစေရန် ဦးတည်ခဲ့သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေခြင်း။
– စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်က အယူသည်းမှုများ ပပျောက်ရေး, လျို့ဝှက်သတင်းများ ဖော်ထုတ်ရေး တို့အတွက် ဦးတည်ခဲ့သော်လည်း မိမိအဖွဲ့အစည်း၏ ဦးတည်ချက်ကို ဆန့်ကျင်မှန်း မသိဆန့်ကျင်ကာ ကမ္ဘာ့ အလျို့ဝှက်ဆုံး အထူးဆန်းဆုံး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်လာခြင်း။
– ဖွဲ့စည်းပြီး ၉ နှစ်အကြာ ၁၇၈၅ ခုနှစ်တွင် မြို့စား Karl Theodor ၏ တရားမဝင် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ကြေငြာပိတ်သိမ်းခံရမှုကြောင့် ပင်ကိုယ်လျို့ဝှက်သော အဖွဲ့အစည်းကြီးသည် ပိုမို၍ ပဟေဌိဆန်လာခဲ့ခြင်း။
– အသင်းဝင်များအကြား Class 1 ; The Nursery, Class2; The Masonic Grades, Class3; The Mysteries ဟူ၍ အဆင့် ၃ ဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ကာ ဘုန်းတော်ကြီး, မင်းညီမင်းသား နှင့် ဘုရင်များပင် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လျို့ဝှက်ပါဝင် ခဲ့ခြင်း။
– Illuminati သည် လက်ရှိအချိန်တွင် အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းများ, The Vertican City, NATO, The UN နှင့် ဟောလီးဝုဒ် အသိုင်းအဝိုင်းအထိပင် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နေသည်ဟု ယုံကြည်ရခြင်း။
– အသင်းကြီး၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုများကို Illuminati ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော ဘဏ်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများမှ ရရှိသောငွေများဖြင့် ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်နေခြင်း။
– သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်များဖြစ်သော ဝါတာလူး စစ်ပွဲ၌ နာပိုလီယံ ကျဆုံးခဲ့ခြင်း, ၁၉၆၃ ခုနှစ်၌ အမေရိကန် သမ္မတ ဂျွန် အက်ဖ် ကနေဒီ လုပ်ကြံခံ ခဲ့ရခြင်း အစရှိသော သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်များတွင် Illuminati မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြသည်ဟု စွပ်စွဲခံခဲ့ရခြင်း။
– Illuminati မှ ‘New World Order’ ခေါ် ကြောက်မက်ဖွယ် လျို့ဝှက်စီမံကိန်း တစ်ခုအား အကောင်အထည်ဖော်နေခြင်း။
– Illuminati စတင်တည်ထောင်ပြီး ၂ လအကြာတွင် USA မှ Declaration of Independence ကို ကြေငြာခဲ့ခြင်းသည် တိုက်ဆိုင်မှုသက်သက် မဖြစ်နိူင်ဟု ယူဆကြခြင်း။ ထို့အပြင် အမေရိကန် ၁ ကျပ်တန် ဒေါ်လာနောက်ဖက်တွင် All Seeing Eye တံဆိပ်ကို တိုက်ဆိုင်စွာတွေ့ရခြင်း။
– လူအများ ထင်သကဲ့သို့ Freemasons သည် Illuminati ၏ အဖွဲ့ခွဲတစ်ခုမဟုတ်ပဲ သီးခြားစီအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ကြခြင်း။
– Illuminati သည် ဘာသာရေး ယုံကြည်မှုများကို ဆန့်ကျင်သည့် အသင်းဖြစ်သော်လည်း ရုပ်ရှင်ကားများတွင် ယူဆကြသကဲ့သို့ နတ်ဆိုးကိုးကွယ်သည့် အယူအလွဲများ မရှိဟု လူအချို့က ယုံကြည်ကြခြင်း။
– Illuminati အသင်း၏ မူလအမှတ်တံဆိပ်သည် All-Seeing Eye တံဆိပ်မဟုတ်ပဲ ရိုမန်ဒဏ္ဏာရီမှ ‘Owl of Minerva or Owl of Athena’ ဇီးကွက်အမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရခြင်း။
– Illuminati အဖွဲ့သည် ယနေ့အချိန်ထိ အမှန်တကယ်ရှိသည် သို့မဟုတ် စိတ်ကူးယာဉ်မျသာဖြစ်သည် ဟူသောအတွေးများကို လူအများကြား လွန်ဆွဲစေကာ လက်ရှိအချိန်ထိ ပဟေဌိဆန်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိနေခြင်း။
စသော အငြင်းပွားဖွယ်ရာများကို ဖန်တီးပေးနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေဖြစ်သယောင် ဖန်တီးထားပေးပြီး ပဟေဠိများ ထပ်ဆင့်တိုးပွားစေသော ဤ လျို့ဝှက်အသင်းကြီး အမှန်တကယ် တည်ရှိနေတာလား?
John F. Kennedy လုပ်ကြံခံရစဉ်က ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တဲ့ Babushka Lady ကကော ဒီအသင်းကြီးနဲ့ ဘယ်လိုပတ်သက်နေ ခဲ့တာလဲ?
နပိုလီယံကို ဝါတာလူးစစ်ပွဲမှာ ကျဆုံးစေခဲ့ရလောက်အောင် ဒီအသင်းကြီး ခရီးရောက်ခဲ့တာလား?
ဆိုတဲ့ မေးခွန်းများစွာရဲ့ အဖြေကတော့ Illuminati အသင်းကြီးနဲ့အတူ ထာဝရပျောက်ကွယ်နေဦးမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း…….
အမေရိကန်၊ ပြင်သစ် နှင့် အင်္ဂလန်ရောက် နှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀ကျော် သက်တမ်းရှိ အီဂျစ်ကျောက်တိုင်ကြီးများ